Top Isimo Inspirational kanye Quotes
Agasti 16, 2017 2 Amazwana
Sanibona bangani! Ngithemba konke enikwenzayo enkulu. izikhathi Hard eze empilweni zabo bonke kodwa labo uhlale omuhle nokuzola sifinyelele njalo emigomweni yabo ngendlela efanele. Ngakho guys sesiphindele ngeqoqo kwethu okuhle phezulu isimo ugqozi futhi izingcaphuno ozokusiza ukuba uthole izimpendulo zemibuzo yakho mayelana ngempilo yakho futhi izinto futhi ngeke akuvumele ukwenza noma yini eniyenzayo ezimpilweni zenu. Eziningi zalezi izingcaphuno uvela legends abaye baphumelela ekuphileni kwabo. Zonke wanna mina Funda kabanzi [...]
Top 29+ Broken Heart be | WhatsApp Isimo
Agasti 15, 2017 0 Amazwana
abantu Hi amahle! Njengoba sazi sonke ukuthi eyaphukileyo ungomunye walabo nakho ukuthi sonke njengabantu ukwabelana kalula, kodwa ungakwazi kuphela ukuzwa wedwa. Heartbreak sucks, ngakho ukwenza Ukuhlukana kwemikhaya. Njengamanje silapha ukwabelana nawe guys iqoqo best of inhliziyo ephukile ezicindezelayo be phezulu ezokwenza akuvumele uchaze imizwa yakho ngamagama ambalwa nabangani kanye nomndeni wakho. Ngakho guys ukulinda iphelile! Ukulandela yilezo sephulé inhliziyo be. Broken Heart be: kodwa Funda kabanzi [...]
42+ Super iDemo WhatsApp Isimo
Agasti 15, 2017 2 Amazwana
Sanibonani nonke! Dlala WhatsApp be mahle ukuze uqale ingxoxo futhi indlela engcono kakhulu ekuvuleleni. Lesi sikhathi siye kuhlangene zonke cool futhi emangalisa WhatsApp be at platform eyodwa, ngakho akudingeki ukuba uye kwenye indawo. Vele uhlole loku! Dlala WhatsApp Isimo: Wonke umuntu has umngane ecasulayo. Uma ungenalo ngempela omunye, ke kungcono cishe nina! UNkulunkulu lokudala ngempela. Ngisho, mane nibheke mina! Ayikho izinyosi- Cha, sithandwa, kungekho imali emsebenzini-akukho. Uma ngempela Funda kabanzi [...]
The Best Quotes Ngokuphila
Agasti 11, 2017 0 Amazwana
Sanibonani bafowethu! kanjani nonke? Ngithemba bonke nenza okuhle. Ngakho guys siyaphinda lapha omunye Iqoqo best of neyethu ngokuphila. It ngokuphelele kuxhomeke kithi indlela esiphila ngayo noma uma sijabulela noma cha. Nge ukuvelela ilanga ngalinye, uthola ukuxosha ithuba lokugcwalisa izinsuku zakho nge meaning-ukuphila kwenu ngendlela okhetha. Manje, silapha wena nibeka eziningi imizamo yethu ukuze nje athole okungcono kithi kuphela guys. Ngithemba wena ukuthanda umsebenzi wethu Funda kabanzi [...]
Love Quotes Nothando be Imilayezo
Sanibonani bafowethu! Ngithemba bonke nenza okuhle. Ngakho guys! Ingabe abanesifiso ukwabelana uthando emoyeni? Oh akazange nje ucabanga yebo? Khona-ke uke sase sifika endaweni efanele kakhulu njengoba silapha ngawe! Namuhla siye beveza iqoqo olukhulu Izingcaphuno ongazisebenzisa njengoba izimo zakho on Facebook, WhatsApp, Twitter kanye kalula ukuhlanganyela imizwa yakho obathandayo. Kunjalo ngaphandle zokuchitha isikhathi sakho esiningi, asiqalisele. Uhlu Love Quotes and be: mina Funda kabanzi [...]